Jiri ọkọlọtọ Reykjavik nke okomoko were mmụọ nke Iceland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Jiri ọkọlọtọ Reykjavik nke okomoko were mmụọ nke Iceland
Ebe a na-eri nri na-eme nke ọma nke nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma, ndụ abalị na-awụ akpata oyi n'ahụ na egwu egwu egwu, ihe a na-ahụ anya na-enwu nke ọma n'isi obodo Iceland na, yana ezigbo mma, mbata nke Reykjavik EDITION na-emekwu ka EDITION Hotels nwee ike ịbata n'otu ntabi anya. ebe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị.
"Reykjavik bụ ezigbo ọmarịcha obodo na-eto eto - zuru oke maka ika anyị," Ian Schrager, onye ọsụ ụzọ ọhụụ nke echiche ụlọ oriri na ọṅụṅụ boutique, Onye Okike Ọha na EDITION kwuru. "Anyị chere na nke a bụ oge Reykjavik na anyị nọ ebe a n'isi ya na n'oge zuru oke."
Imepe na nhụchalụ na Nọvemba 9, 2021, Reykjavik EDITION ga-esetịpụ ọkọlọtọ ọhụrụ dị ka ahụmịhe ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbụ nke obodo ahụ, na-ejikọta ihe kacha mma nke isi obodo Iceland na ahụmịhe nke onwe, mmekọrịta chiri anya na nke onye nke ejiri mara EDITION ika. Ihe si na ya pụta bụ nnukwu obodo mepere emepe nke nwere ọnụ ụlọ 253, ụlọ mmanya na-enweghị atụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbinye aka na ụlọ oriri na ọṅụṅụ abalị na, n'ụdị EDITION n'ezie, iwebata ụdị ọhụrụ nke ọdịmma ọha na eze ọgbara ọhụrụ. N'ala nke mmiri ọkụ, mmiri ịnweta mmiri na fjords eke, ihe ọhụrụ a na-emepụta ihe, ahụmahụ visceral nke mmetụta uche na eziokwu nke Ian Schrager, yana Marriott International ogologo oge ọrụ ọkachamara na njedebe zuru ụwa ọnụ, na-arụpụta onyinye dị iche iche nke na-eme ka Reykjavik na-eto eto. rata dị ka ụwa klaasị mba ụwa cosmopolitan ebe.
Iceland bụ ebe ọtụtụ ndị na-achọsi ike, n'etiti North America na Western Europe - ụzọ ụgbọ elu na-abawanye, na ọdịdị ụwa ya, na-adọta ndị ọbịa si n'ebe dị anya. EDITION Reykjavik bụ akara mbụ okomoko mbụ na -abanye n'ahịa nke nwere akụrụngwa na ọrụ dịka ọ nweghị. Nke mbụ pụtara na eserese ngosi mgbe onye isi chess America bụ Bobby Fischer meriri World Chess Championship na Reykjavik na 1972, Schrager, bụ onye na-eso ihe omume ahụ n'oge ahụ, kwuru na ọmarịcha obodo ahụ na-emebibeghị, tụrụ ya n'anya. N'ezie, nke dị na North Atlantic Ocean, dị n'okpuru Arctic Circle, Iceland na-eme nke ọma n'ụzọ nkịtị, ọdịdị ala ya na-agbanwe mgbe niile site na ugwu mgbawa, na-agbapụta mmiri na-ekpo ọkụ, na-agbawa geysers na efere tectonic na-agbanwe. Ihe ndị a niile arụpụtala ọmarịcha ihe omimi nke ahịhịa ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, glaciers na-arị elu na ugwu ndị na-adịghị ike na ndagwurugwu miri emi nke osimiri gbubiri. Schrager kwuru, sị: “Na Iceland, ị ga-ahụ ihe ndị ị na-agaghị ahụ ebe ọzọ. "Karịa ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa, ọ bụ ezigbo ohere ịbanye na ụwa na ọdịdị na anyị nwere obi ụtọ ịgbasawanye akara ngosi EDITION na ebe dị egwu nke nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-akpali akpali nke na-enye gị echiche nke ọma. ebe."
N'iji Midas aka ya, Ian Schrager ejirila nlezianya chepụta, chepụta ma hazie ụlọ nkwari akụ ahụ iji mepụta ihe omimi na echiche nke anwansi nanị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a. Emebere Reykjavik EDITION na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ihe owuwu obodo, T.ark na ụlọ ọrụ New York, Roman na Williams nwere ntụzịaka nke imewe ISC (Ian Schrager Company), ji aghụghọ jide mmụọ Reykjavik ka ọ na-ezere clichés wee nọgide na-agbanye mkpọrọgwụ na ya. akara EDITION siri ike nke ọkaibe na ụdị a nụchara anụcha. N'elu ọdụ ụgbọ mmiri, megide echiche ugwu dị ebube, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ dị n'ebe na-enweghị ntụpọ na etiti obodo ahụ: n'akụkụ Harpa, ebe a na-egwu egwu egwu na ebe ogbako - nke onye Icelandic na Danish na-ese ihe bụ Olafur mere facade nke nwere ọtụtụ agba. Eliasson - yana nkeji ole na ole site na Laugavegur, okporo ụzọ ịzụ ahịa na ogbe ndịda Reykjavik.
Site na mpụga, EDITION Reykjavik bụ ihe mgbakwunye pụtara ìhè na mpaghara ime obodo a. Ejiri usoro ndị Japan oge ochie gbachie facade nke ebony facade nke shou sugi ban osisi ka ọ na-agba oji, na okpokolo agba agbajiri agbaji na-apụta ìhè n'okirikiri ala Iceland dị egwu. Ahịrị dị mfe, dị ọcha nke ụlọ ahụ n'onwe ya ka etinyere ya ka ọ nweta ọtụtụ echiche na ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri ya nwere ọnụ ụzọ mbata abụọ nwere ike ịnweta site na Harpa plaza, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Nke ikpeazụ - n'echiche dị ukwuu nke mbata yiri The Times Square EDITION - nwere mkpuchi mkpuchi, n'okpuru ya na-enwu site na oghere iko LED 12,210.
Dị ka ọ dị n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ EDITION niile, ọnụ ụlọ ebe a na-edebe ọnụ ụlọ bụ ebe dị ike, ebe ọha na eze na-egosipụta n'ụzọ aghụghọ nke ọnọdụ na oge. N'ebe a, nkume basalt - ma ọ bụ nkume mgbawa ugwu - bụ ihe a ma ama, na-apụta n'elu ala, bụ nke e ji ụkpụrụ dị mgbagwoju anya nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke Icelandic geometry, na oche nnabata mara mma nke pụtara ìhè. N'ime ime ụlọ ịsa ahụ, ndị otu ISC agbakwunyela Icelandic lava stone sculptural totem iji dozie ihe ndị na-ekpo ọkụ dị ka saddle saddle akpụkpọ anụ nke a kpuchiri gburugburu kọlụm - na ala osisi oak na-acha ọcha, ogwe elu na slats, nke dị n'akụkụ ọnụ ụlọ mmanya. Menu ihe ọ drinksụ drinksụ n'ọnụ ụlọ na-elekwasị anya na mmanya zuru ụwa ọnụ site na nhọrọ iko na mmanya mara mma nke nwere ntụgharị Icelandic. Ime ụlọ ịsa ahụ nwere ebe a na-ere ọkụ na-emepe emepe nke bụ ebe mgbaba nke oghere ahụ, nke oche gbara ya gburugburu na nchịkọta arịa ndị a na-eme omenala n'ime otu ndị na-akpachi anya, dị ka oche oche Jean-Michel Frank sitere n'ike mmụọ nsọ na-acha ọcha na Pierre Jeanneret. -ike mmụọ nsọ oche na nwa velvet. Dị ka ọ dị mgbe ọ bụla, a na-ekwusi ike na ọkụ ọkụ na-apụtaghị ìhè, bụ nke e jiri nlezianya tụlee iji mee ka ọkụ dị nro na ime ka arịa ụlọ dị ka ụlọ mmanya na oche nnabata na Christian Liaigre na-acha ọcha ọla kọpa oriọna iji mepụta ihe yiri ọla. igbe echichi.
N'ime ọnụ ụzọ ụlọ nkwari akụ ahụ, ISC na ndị na-arụ ọrụ obodo na-arụkọ ọrụ iji mepụta totem sculpture nke stacked, columnar basalt slate si n'ebe ndịda Iceland. N'ịbụ nke dị nso na mita anọ n'ịdị elu, a na-ahụ mkpali ihe ọkpụkpụ a na omenala Cairn nke na-arụ ọrụ dị ka akara ngosi n'ofe obodo Iceland. Igwe ọkụ eletrik na kandụl na-amụnye nke ọma na bench basalt gbara ya gburugburu, totem ahụ nwere akpụkpọ anụ ojii na-acha odo odo, damask ojii na ohiri isi silk, na-aghọ ebe mgbakọ a ga-ahụ ma hụ ya n'etiti etiti ọnụ ụlọ. N'akụkụ nke a, nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke aurora borealis (Northern Light), ISC ewepụtala vidiyo nke Northern Lights wee mepụta ihe osise dijitalụ na-emikpu, akụkụ atọ na ikuku ikuku nke ọmarịcha agba egwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo odo. N'ịbụ nke dị n'ime ọnụ ụlọ, ọ na-akpali mmeghachi omume na mmetụta mmetụta, dị ka ịgba akaebe ihe okike dị na mbara igwe abalị Icelandic… ma na nkasi obi, ikpo ọkụ, na mmekọrịta chiri anya nke ọnụ ụlọ na ebe a na-ere ọkụ. Anyị na-akpọ ya Northern Light na-achọ.
Ịnweta site n'ọnụ ụlọ ime ụlọ, ala ala bụkwa ụlọ Tides, ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbinye aka nwere ọnụ ụlọ iri nri nkeonwe, yana cafe nwere ihe eji eme achịcha, yana Tölt, ụlọ mmanya na-akpachi anya nke na-enweta ihe ngosi ya na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ London EDITION na-emeri. Tides, nke nwere mbara èzí na ọnụ ụzọ mmiri nke ya, bụ Gunnar Karl Gíslason na-akwado ya - onye isi nri n'azụ Dill, ụlọ oriri na ọṅụṅụ New Nordic Michelin nwere kpakpando nke Reykjavik. A tụlere ime ụlọ ndị bara ọgaranya na ndị ọkaibe maka mgbanwe enweghị nkebi site n'ehihie ruo abalị, na-egosipụta windo ala ruo n'uko nke, n'ehihie, na-amụnye ọkụ eke na ogidi kọmpụta na-efe efe na nkọwa osisi ntụ ntụ dị ka akụkụ elu ụlọ a na-enwu n'ụzọ dị egwu. , arịa dị iche iche, na ihe mgbochi etiti nwere ihe dị ka hexagonal nke kokwasịrị chandelier bronze na alabaster emere omenala site n'aka onye omenkà a ma ama nke France, Eric Schmitt. N'ụtụtụ, nri ụtụtụ bụ ngwakọta dị ọhụrụ ma dị mma nke ihe ọṅụṅụ dị ọcha, achịcha achịcha, mkpụrụ osisi, cereal na skyr (yoghurt Icelandic) nke a na-agbakwunye na menu nke efere ọkụ na nhọrọ nke sanwichi mepere emepe. Maka nri ehihie na nri ehihie, Gíslason na-enye nri Icelandic ọgbara ọhụrụ, na-enwe echiche aghụghọ nke ụzọ isi nri ọdịnala, gbadoro anya na ngwaahịa mpaghara oge a na ihe kacha mma nke ihe eji eme ihe zuru ụwa ọnụ nke a na-esi n'ọkụ mepere emepe. N'akụkụ nnukwu ndepụta mmanya zuru ụwa ọnụ, na-atụ anya nri dị ka salad kwụ ọtọ nke etinyere na mushrooms oporo e ghere eghe nke soy sauce na almọnd a ṅara n'ọkụ, chara Arctic dum juru na lemon, dil na galik bọta, cod Atlantic sie, poteto grilled, herbs agwakọta na bọta na atụrụ ubu braised na slowed grilled, pickled eyịm Mint na apụl, na maka eji megharịa ọnụ, Tides karọt achicha, buttermilk ice-cream, karọt na oké osimiri buckthorn jam, na a ṅara n'ọkụ caraway mmanụ. Enwekwara menu brunch izu ụka na abalị atọ n'izu, The Counter, na-elepụ anya na kichin mepere emepe, ga-eje ozi nri ụtọ asatọ nke nwere mmanya mmanya maka mmadụ iri. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-achọ ihe nkịtị nwere ike ịbanye n'ime ebe a na-eme achịcha na cafe maka kọfị na nhọrọ nke scones crowberry ọhụrụ a na-esi na ya na-atọ ụtọ ntụ ọka ma ọ bụ bred rye sandwiches ebe ndị ọbịa nwere ike iri nri ma ọ bụ wepụ ya.
N'akụkụ nke ọzọ nke ime ụlọ ịwụ ahụ, n'ebe anya na-adịghị ahụ anya, Tölt - aha ya bụ ụgbọ mmiri Icelandic gait nke ise a kacha mara amara - bụ ụlọ mmanya mara mma, nke e mere dị ka ebe nsọ zoro ezo nke nwere oghere atọ dị nso nke na-egosipụta akwa akwa omenala mara mma nke nwere ụkpụrụ mmụọ nsọ. site na geometry ọdịnala Icelandic, mgbidi tambour teak, oriri oroma oroma na pouf ntutu isi pony nke gbara gburugburu ebe ekwú ọkụ. N'èzí ebe a na-a alcoụ mmanya, a na-eji oghere ụlọ ukpa bara ụba kpuchie oghere ahụ, na ala ụlọ, chandelier ukpa mere na windo ụlọ ruo n'elu ụlọ nke na-egosipụta echiche Harpa. N'azụ mmanya mabul na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere shelf ọla ochie merela ochie nke kwụsịrị n'uko ụlọ, nke na-emepụta ọkụ na-enwu enwu n'okpuru nke ị ga-enwe nri nri mmanya sitere na omenala Icelandic site na iji mmụọ Icelandic mpaghara.
N'ịhazi ka ọ bụrụ ebe nke ya, Roof dị n'ala nke asaa nke nkwari akụ ahụ ma na-enye ugwu panoramic, North Atlantic Ocean na vistas obodo ochie. Oghere dị iche iche nke nwere ike kewaa site na ọnụ ụzọ iko maka ihe omume nzuzo na-enye ya ohere ịbụ ebe kachasị mma nke ga-esi na-ekpori ndụ na mgbede okpomọkụ na-adịghị agwụ agwụ yana ọkụ ọkụ ugwu dị egwu na ọnwa oyi. Ọnụ ụzọ enyo dị n'ala ruo n'uko na-emeghe n'elu nnukwu ihe mkpuchi nke oge a na-eme n'èzí, gbasasịa na oche dị mma na nnukwu ọkụ ọkụ, ebe ime ụlọ na-acha anụnụ anụnụ na-emepụta ihe ndabere nke na-adịghị ewepụ echiche. N'ebe a, a na-agbakwunye vibe nkịtị site na obere menu nke nri ntụsara ahụ dị ka achịcha a ṅara n'ọkụ, sandwiches toasted na salad ọhụrụ. Site n'echiche a, o doro anya na Ian Schrager mere ụlọ nkwari akụ ahụ dabere na echiche sitere na ụlọ ahụ.
N'ịgbasa n'elu ala dị n'okpuru ụlọ, e mere ụlọ oriri na nkwari akụ 253 nke ụlọ nkwari akụ ahụ ka ọ bụrụ ebe ezumike na-ekpo ọkụ, nke ọ bụla nwere akwa ya na-eche ihu na windo ụlọ ruo na elu ụlọ nke na-egosipụta echiche dị iche iche nke agbata obi gbara ya gburugburu. Somefọdụ na -abịa na mbara ala dị n'èzí, ebe ha niile bụ ihe atụ nke ụzọ EDITION si aga ahịa okomoko ọgbara ọhụrụ nwere ụtọ mpaghara. Palette osisi ash na-acha odo odo na osisi oak na-acha ntụ ntụ na-arụ ọrụ dị ka ntọala na-ekpo ọkụ maka mgbidi kọmpat, ngwá ụlọ ndị Italian na-eme omenala, ihe mkpuchi ihe ndina ọla kọpa, akwa faux fur, na ihe osise na ngwa sitere n'aka ndị omenkà obodo, dị ka akwa mara mma. tụfuo site na ụlọ ọrụ ajị anụ, Ístex, ceramics nke onye na-ese ihe Guðbjörg Káradóttir, na nka ime ụlọ nke ndị omenkà Icelandic ama ama Pall Stefansson na Ragnar Axelsson na-egosi ọdịdị ala Icelandic, naanị na EDITION. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ịsa ahụ monochrome nwere taịlị ọcha seramiiki ejiri aka mee na Italy, ejiri ihe efu mabul na-acha ọcha, ngwa ojii matte, na akwa akwa n'akụkụ ụlọ mposi Le Labo nke omenala EDITION na-esi ísì ụtọ. Site na isi nkuku ya dị n'ala nke isii, Penthouse Suite nke nwere otu ime - nke nwere mbara ala nke ya nwere ọdụ ụgbọ mmiri mara mma, Harpa na echiche ugwu nke na-agbakwunyere site na ọkụ na-egbuke egbuke, nke jupụtara n'ime ụlọ mara mma nke ihe eji eme omenala na ụda oatmeal. A na-ejikwa ụlọ ịsa ahụ buru ibu nke nwere marble ọcha Italian na ebe a na-ere ọkụ nke etiti.
EDITION Reykjavik na-enye nzukọ ọgbara ọhụrụ na oghere mmemme, gụnyere ụlọ ihe nkiri na-agbanwe agbanwe, ime ụlọ nwere ọkụ eke, ala ala ịcha ọcha oat, yana nnukwu ụlọ ịgba bọọlụ nwere oghere arụ ọrụ. Enwere ike kewaa ụlọ ịgba bọọlụ na-agbanwe agbanwe nke nwere windo ugegbe nke ala ruo n'uko gaa na oghere abụọ dị iche iche, ebe nnukwu ọnụ ụzọ enyo dị obosara iji nabata ụgbọ ala. N'ime ụlọ ịgba bọọlụ, e nwere chandelier alabaster kwụgidere nke jikọtara ya na ihe mkpuchi eke ekesarade gburugburu ụlọ ịgba bọọlụ.
N'ala ala dị ala bụ ebe ọdịda anyanwụ, na-emepe ka afọ a gasịrị, ebe abalị dị jụụ n'okpuru ala nke nwere usoro ụda ọgbara ọhụrụ na ọkụ ihe nkiri nke na-enwu n'ime ime ojii gbara ọchịchịrị na nke na-adịghị mma nke nwere ihe nkedo ojii. Enwere ike kewaa ọdịda anyanwụ n'ime oghere atọ na ịnweta site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Harpa square. Tinyere menu mmanya na-egbu egbu na usoro ihe omume na-aga n'ihu, klọb ahụ ga-akpọtụrụ ụfọdụ DJ na ndị na-eme ihe nkiri, na-edobe ya dị ka ebe kachasị ọhụrụ a na-agaghị echefu echefu na ọnọdụ ndụ abalị na Reykjavik. Enwekwara ụzọ mbata nkeonwe maka ndị chọrọ ezi uche. "Ọ gaara abụ nrọ imeghe Studio 54 ebe a ọchịchịrị na-adị ọnwa 6 karịa awa 8 dịka ọ na-eme na New York City. Ọ gaara abụ ebe kacha mma maka ya, "Schrager na-ekwu.
Ọzọkwa, n'ala ala dị ala bụ ụlọ mgbatị ahụ, nke a na-eji ọzụzụ ike ojii nke ọgbara ọhụrụ, ịdị arọ, na akụrụngwa cardio, agbanyeghị, ọ bụ echiche ọha mmadụ na Spa bụ otu n'ime ihe pụrụ iche. akụkụ dị na nkwari akụ ma na-edobe Reykjavik EDITION iche. N'akụkụ ọnụ ụlọ ọgwụgwọ atọ, hammam, ụlọ uzuoku, sauna, na ọdọ mmiri mmiri nke na-enye hydrotherapy, enwerekwa ebe ezumike etiti nwere ebe a na-asa spa, nke na-enye nri ụbọchị ahụike ọhụrụ nke mgbatị ahụ Viking na-ama jijiji, champagnes na, ahịhịa na-atọ ụtọ. vodka infusions n'akụkụ nri dị ka achịcha mgbawa ugwu na nwa lava nnu. Nke a na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ime ọdọ mmiri na-asọ asọ mmiri yana ọgwụgwọ Sundown Spa nkeji iri isii, nke gụnyere ịhịa aka n'ahụ na-enye ume na ịhịa aka n'ahụ onyx dị jụụ. N'ịbụ nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ, Spa bụ ohere zuru oke tupu mmemme mmemme iji mee ka ị kwado nke ọma maka mgbede emume dị egwu. Schrager kwuru, sị: “Ebe a na-asa ahụ́ na ime ahụ́ ike nwere ụlọ mmanya bụ ihe anyị ahụbeghị mbụ. "Mana ịga ebe ahụ na ịkpakọrịta na ịṅụ ihe ọṅụṅụ wee banye na mmiri ọkụ bụ, ọzọ, nzaghachi maka ịnọ na Iceland. Na ijikọta nke a n'ụzọ mara mma na nke mara mma na-akwado ihe akara EDITION bụ gbasara."